Tababaraha Manchester City Pep Guardiola Oo Ka Warbixinaya Dhaawaca Kevin De Bruyne
HomeWararka Ciyaaraha MaantaTababaraha Manchester City Pep Guardiola oo ka warbixinaya dhaawaca Kevin De Bruyne
February 10, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Horyaalka Ingiriiska 0
Tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa ka warbixiyay xaalada caafimaad ee Kevin De Bruyne oo kasoo kabtay dhaawac muruqa ah oo soo gaaray intii lagu guda jiray guushii 2-0 ay ka gaareen Aston Villa bishii hore.
Tababaraha 50 jirka ah ayaa shaaca ka qaaday in xiddiga reer Belguim uu ku soo laabtay tababarka shaqsiga ah uuna dareemayo “aad u fiican” wakhti xaadirkan. Ciyaaryahanka khadka dhexe ayaa seegay shan kulan oo tartamada oo dhan ah kooxda Manchester City.
Kevin De Bruyne ayaa qaab ciyaareed cajiib ah soo bandhigaya xilli ciyaareedkan isaga oo dhaliyay 3 gool sidoo kale diiwaan galiyay 10 kale 17 kulan oo premier League ah.
Manchester City ayaa soo martay bilow aan qummaneyn oo ay ku bilaabatay ololaheeda Premier League laakiin haatan shan dhibcood ayey hogaanka ku heysaa.
Kevin De Bruyne ayaa door muhiim ah ka ciyaaray qaab ciyaareedkii cajiibka ahaa ee ay soo bandhigtay kooxda Man City ka hor inta uuna dhaawac ka soo gaarin muruqa.
Pep Guardiola ayaa xaqiijiyay in ciyaaryahanka khadka dhexe uusan wax door ah ka ciyaari doonin kulanka Cityzens ee wareega shanaad ee FA Cup ee ay la ciyaarayaan Swansea City caawa.
Tababaraha reer Spain ayaa si kastaba ha ahaatee, rajeynaya inuu dib u helo 29 jirkaan kulanka Manchester City ee wareega 16ka Champions League ee ay la ciyaarayaan Borussia Monchengladbach dhamaadka bishaan.
Isagoo ka hadlaya soo kabashada De Bruyne, Guardiola ayaa u sheegay bogga rasmiga ah ee kooxda:
“Wuu soo fiicnaanayaa durbaba tababar ayuu qaadanayaa, mana ahan kooxda kaligiis laakiin kaligiis ayuu dareemayaa wanaag. Waa wax fiican, runti .